नेपाल जेसीज क्षेत्र ‘ख’ सम्मेलन– २०७६ सदस्यबीच भाइचाराको सम्बन्धका साथै व्यक्तित्व विकासमा महत्वपूर्ण
अन्तर्वार्ता 48 पटक पढिएको
सुनिल अधिकारी// युवाहरुको नेतृत्व र भातृत्वको विकास गर्दै मानवताको सेवाको पवित्र उद्देश्य बोकेर सन् २०११ मा स्थापना भई समाजको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा आफ्नो महत्वपूर्ण उपस्थिति जनाइरहेको छ ।
छोटो अवधिमा नै बस्तीपुर जेसीजले नेपाल जेसीजले आयोजना गरेका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरु क्षेत्र ‘ख’ अध्यक्ष भेला २०१५ र नोम÷लोम लिडर्स एकेडेमी–२०१६ सफलताका साथ सम्पन्न गरिसकेको छ । बस्तीपुर जेसीजले राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रममध्ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रममध्ये क्षेत्र ‘ख’ सम्मेलन आज शुक्रबारदेखि हेटौंडामा आयोजना गर्दैछ । २०१८ मा पर्वत जेसीजले आयोजनाको गरेको क्षेत्र ‘ख’ सम्मेलनपछि २०१९ का लागि क्षेत्र ‘ख’ सम्मेलन हेटौंडामा हुन लागेको हो । जेसीजले यस सम्मेलनलाई मकवानपुरको अवसरका रुपमा लिएको छ । जिल्लाको कला–संस्कृतिको संरक्षणमा यो कार्यक्रमले पूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास पनि राखिएको छ । आज शुक्रबार र शनिबार हुने सम्मेलनमा सहभागी हुन जेसीजको क्षेत्र ‘ख’ का ३२ वटा विभिन्न शाखाहरुबाट करिब ६ सय युवा हेटौंडा आएका छन् ।
सम्मेलनको विषयमा रहेर बस्तीपुर जेसीजका अध्यक्ष सुनिल अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीः
जेसीज क्षेत्र ‘ख’ सम्मेलन पहिलो पटक बस्तीपुर जेसीजले आजबाट सुरु गर्दैछ । यो कस्तो सम्मेलन हो ?
क्षेत्र ख मा नेपाल जेसीजको ३२ वटा शाखाहरु आवद्व छ । आउन चाहिँ यसमा नेपालभरिका जेसीजका सदस्यहरु आउँछन् । विशेषतः यो सम्मेलन जेसीजका सदस्यहरुबीच भाईचाराको विकास तथा व्यक्तित्व विकास गर्ने हो ।
यो सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य के हो ?
नेपाल जेसीजको तालिकामा ४ वटा क्षेत्रहरु छ । ती ४ वटा क्षेत्रले एक वर्षभित्रमा एउटा क्षेत्रले यसको आयोजना गर्दछ । अब यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ १८ देखि ४० वर्षभित्रका युवाहरु यसमा आवद्व हुन्छन् । ती युवाहरुको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासमा सहयोग पु¥याउनु हो ।
सम्मेलनमा कहा“कहा“बाट कति संख्यामा उपस्थिति रहन्छ ?
यस सम्मेलनमा मुलतः नेपालभरिकै युवाहरु सहभागी हुन्छन् । क्षेत्र ‘ख’ बाट चाहिँ कम्तिमा हरेक शाखाबाट १५ देखि २० जना गरी ६ सय भन्दा बढी युवाहरुको सहभागिता रहन्छ ।
सम्मेलन भइरह“दा यसले हेटौंडामा चाहि“ कस्तोप्रभाव छोड्छ ?
यो भन्दा पहिला लेडी जेसीज र बसामाडी जेसीजले पनि गरेको थियो तर बस्तिपुर जेसीजले भने पहिलो पटक गर्न लागेको हो । त्यसले पनि हेटौंडामा राम्रो नै प्रभाव पारेको थियो । अहिलेको सम्मेलनले हेटौंडाको पर्यटकीय प्रवद्र्वनमा राम्रो प्रभाव पार्छ । हामीले सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने सबैलाई मकवानपुरको पर्यटकीय स्थल घुमाउने पनि निर्णय गरेका छौं । त्यसैले पर्यटन विकासमा त पक्कै पनि राम्रो प्रभाव पार्छ ।
युवाहरुको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासको लागि जेसीज अभियान भनिरह“दा जेसीजभित्र केही विकृति देखिन्छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
हरेक संघ सस्ंथामा धेरै थोरै केही न केही नराम्रा पक्षहरु पनि हुन्छन् । समाजले यो गर्न हुने , त्यो गर्न नहुने भनेको जस्तो सीमा तोकिदिएको छ । त्यसको आधारमा समाजमा नपच्ने केही कामहरु पनि हुन सक्छ । तर पनि जेसीजले सिकाएको आधारमा नै जेसीजको साथीहरु हिँडेकै कारण ठूलो नेतृत्व लिने ठाउँमा पुगेको उदाहरण पनि छन् । सानोतिनो कहिँ न कहिँ देखिन्छ त्यसलाई म बृहत रुपमा लिन्नँ ।
जेसीजभित्र सानोतिनो विकृतिहरु त छन् भन्नुभयो । त्यो विकृतिलाई हटाउन के गर्नुपर्ला ?
पहिलाको अनुपातमा अहिले त्यस्तो विकृतिमा बिस्तारै कमी आइरहेकै छ । भर्खरका युवाहरु जेसीजमा प्रवेश गरेका हुन्छन् । आचरणमा नै त्यस्तो केही पनि विकृति छैन । कहिले काहिँ खाईपाईमा विकृति जस्तो देखिने हो । त्यो पनि क्रमिक रुपमा हट्दै आएको छ । सामाजिक दायित्वको बारेमा ज्ञान हुँदै गएपछि त्यो स्वतः हट्छ । त्यसको लागि केही गर्नुपर्दैन ।
अलिक बढी पैसा र पहु“च भएकाहरु मात्र जेसीजमा अट्न सक्छन् भनिन्छ नि ।
जेसीजमा आर्थिक हैसियतको कुरा म खासै देख्दिन । हाम्रो बस्तीपुर जेसीजमा धेरै जस्तो शिक्षक पेशामा आधारित सदस्यहरु हुनुहुन्छ । शिक्षकले नै अध्यक्ष बनेर जेसीजको एक वर्ष नेतृत्व गरिसकेको अवस्था पनि छ । शिक्षकको आर्थिक आयस्रोत त्यतिमाथि नभएपनि नेतृत्व राम्रो गर्नुभएको थियो । आर्थिक हैसियत हुनेले चाहिनेभन्दा बढी गर्छन् भने कम हुनेले चाहिने जत्ति मात्रै गर्छन् । एउटै कार्यक्रम २० हजारमा पनि गर्न सकिन्छ भने ५ लाख पनि खर्च गर्न सकियो । त्यसैले जेसीजले खर्च गराउने होइन । सामाजिक काम गर्न र जेसीजमा लाग्न धेरै आर्थिक रकम चाहिँदैन । सामान्य आयस्रोत भएका मान्छे पनि लाग्न सक्छन् ।
यो क्षेत्र ‘ख’ सम्मेलनले युवाको क्षमता विकास र सामाजिक सेवाको लागि के कस्तो रणनीति बनाउ“छ ?
यसमा मैले ठ्याक्कै यस्तो हुन्छ भन्ने अवस्था छैन । नेपाल जेसीजको प्रतिनिधि आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ । हामीले कार्यक्रमको सम्पूर्ण तयारी गरेर नेपाल जेसीजलाई हस्तान्तरण गर्ने हुँदा यो अहिले नै थाहा हुने विषय होईन । व्यापार व्यवसाय, सामाजिक कार्य तथा व्यक्तित्व विकाससम्बन्धी विभिन्न ६÷७ वटा क्षेत्रमा सम्मेलनमा छलफल तथा प्रस्तुतीकरण हुन्छ । त्यसैको आधारमा पछि थाहा हुन्छ ।
घोषणापत्र पनि जारी हुन्छ भनिएको छ, त्यो घोषणापत्र कसकसले लागू गर्छन्, समग्र राष्ट्रिय जेसीजले त्यसलाई अवलम्बन गर्छ ?
यो कार्यक्रमको समापनको केही क्षणअघि दुई दिनको सम्मेलनले कस्तो खालको छाप छोड्यो भनेर छलफल हुन्छ । त्यसपछि बस्तीपुर जेसीजले घोषणापत्र जारी गर्छ । दुई दिनमा केके गर्यौ ? त्यसले समाजमा कस्तो खालको प्रभाव पा¥यो भन्ने बारेमा घोषणा पत्र जारी गर्छौँ ।
2639755	Times Visited.